धेरै चिया पिउनुहुन्छ ? तपाईंका लागि खुसीको खबर छ | latestnepali.com
धेरै चिया पिउनुहुन्छ ? तपाईंका लागि खुसीको खबर छ
काठमाडौं।के तपाईं पनि त्यस्तै एक व्यक्ति हो, जसलाई चिया नभइ हुँदैन ? अर्थात् चिया धेरै पिउने गर्नुहुन्छ ? प्रायजसो चिया धेरै पिउने मान्छेलाई सल्लाह दिने गरिन्छ कि धेरै चिया पियो भने बिमार भइन्छ, कम गर ! तर, यहाँ हामीले चिया पिउने व्यक्तिका लागि खुसीको समाचार लिएर आएका छौं ।
मोडलिङमा जम्दै पत्रकार ऋषि धमला, यसपटक पिताको भूमिकामा देखिए (हेर्नुहोस् भिडियो)